Maitiro ekudzoreredza iyo yekare Vhoriyamu Mixer mukati Windows 11
Kana iwe wanga uchicherekedza ipapo waizoziva kuti Microsoft yakabvisa yakasarudzika vhoriyamu musanganiswa mukati Windows 11, uye haasi munhu wese anoita seanofadzwa nechisarudzo. Mubvunzo ndewokuti, munhu angachinja sei kudzokera kune yekare vhoriyamu musanganiswa pasina kudzika kusvika Windows 10? Ndogadzirisa sei Windows volume mixer? Kudzosera zvinhu kunzvimbo yako yekunyaradza, ipapo uchafanirwa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekudzoreredza iyo yekare Vhoriyamu Mixer mukati Windows 11
Gadzirisa Pink Screen yeRufu kukanganisa mukati Windows 11 / 10
Iyo Blue Screen yeRufu ndeimwe yeakajairika software nyaya pa Windows makombiyuta. Vazhinji vako unofanira kunge wakatarisana nazvo pane imwe nguva yekushandisa PC yako. Imwe nyaya, iyo iyo vazhinji venyu vangasaziva nezvayo, iPink Screen yeRufu. Yakatumidzwa zvakafanana neBSOD, iyi nyaya inoitika kana PC yako ichipfuura nesoftware uye hardware kukundikana. Kufanana neBSOD, skrini inoenda ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Gadzirisa Pink Screen yeRufu kukanganisa mukati Windows 11 / 10
Enda kune peji 387